Ulimi lohlelo lokufundisa izingane zami | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Yiluphi ulimi lokuhlela lokufundisa izingane zami
UJuan Luis Arboledas | | General
Uma ungumthandi wohlelo, impela ngezikhathi ezingaphezu kwesisodwa uzobe ubhekane nesidingo sokusebenza ngezilimi ezahlukahlukene. Leli phuzu liqinisekile ukuthi uzobe usulazi kahle noma, mhlawumbe kushiwo kangcono, usufinyelele kuleso sigaba lapho ungasenakho ukwesaba lapho uqala ukusebenza nezinye izinhlobo zezilimi ngoba ungathola nokujabulela imininingwane ngamunye ayethula eyodwa.
Esigabeni esithuthuke kakhulu sempilo yakho, kungenzeka ukuthi isikhathi sesifikile lapho ufuna ukwabelana ngokuzilibazisa kwakho nokuncane kunakho konke kwendlu, into engaba nzima impela ngoba ukufunda ukuhlela kahle akulona ulwazi ongaluthola Ezinyangeni noma eminyakeni, uhlala ufunda zombili izifundo futhi ubuka nekhodi yomthombo eyenziwe abanye onjiniyela. Ngenxa yalokhu kanye nokucaciswa okulethwa ulimi ngalunye, Yikuphi okungcono kakhulu ukuthi izingane ezisendlini yethu zifunde?
Iqiniso ukuthi ukuphela kwento esinqume ngayo empeleni yinto elula njengokuhlela, njengoba kukhonjisiwe, kuyinto ebaluleke kakhulu okumele siyigxilise kubantwana bethu. Ngeshwa lapho siqala ukuphenya amathuba amaningi, ngakho-ke kwa-HWLibre sinqume ukuzama ukuhlela ifayili le- umhlahlandlela omncane, cishe kancane ngeminyaka, lapho sizokhuluma khona nge izilimi, ngombono wami, ezingafundisa kakhulu futhi zithakazelise.
1 Iminyaka ephakathi kweminyaka emi-3 nengu-6
1.1 Skrola Jr
1.2 Imidlalo ehlukene enamarobhothi
2 Iminyaka ephakathi kweminyaka emi-7 nengu-9
3 Iminyaka ephakathi kweminyaka eyishumi kuya kwengu-10
3.1 Ikhodi Monkey
4 Iminyaka ephakathi kweminyaka eyishumi kuya kwengu-13
5 Iminyaka engu-17 nangaphezulu
Iminyaka ephakathi kweminyaka emi-3 nengu-6
Kulesi sinyathelo sokuqala, iqiniso ukuthi izingane zingabonakala kusencane kakhulu ukuqala ukuqonda okwenziwa esinyathelweni esithile. Ngenxa yalokhu, kungcono ukuthi ubenze bafunde bengazi ukuthi benzani ngempela, ngalesi sikhathi mhlawumbe lokhu akudingekile ngakho-ke inketho engcono ukuzama ukubenza bafunde ngokudlala.
Ukuqala kokucabanga okungaba ngamakhompiyutha, into enhle kakhulu ukuthi bathole uhlobo oluthile lwethoyizi abalithandayo futhi luhehe ukunakwa kwabo Futhi, ngalo mqondo, ngokuphambene nalokho ongakucabanga, kunezinketho eziningi esinazo emakethe.
Uma singafuni ukuchitha imali eningi kulo mzamo wokuqala wokuqalisa abancane bethu kulo mhlaba, enye indlela kungaba ukubheja Skrola Jr. Sikhuluma ngohlelo lokusebenza olutholakala kuzo zombili i-Android ne-iOS olusebenzisa ukusetshenziswa kwalo ezinhlelweni ezivimbayo.
Iphuzu elibi lalesi sicelo litholakala ezindaweni ezimbalwa ezenza ukuthi lihehe. Ngakolunye uhlangothi, iminyaka yengane kufanele ibe phezulu ebangeni esilimake kusukela lapho kumele ikwazi ukuphatha ithebhulethi kalula kanye neqiniso lokuthi kufanele usuvele unayo amakhono athile ukuqonda.
Okuvuna lokho uhlelo lokusebenza lumahhala futhi inemibono embalwa engasebenza njengezibonelo nemihlahlandlela yokuqalisa.
Imidlalo ehlukene enamarobhothi
Ngalesi sikhathi, ngaphandle kokunikeza amagama noma ama-brand, ngikutshele ukuthi namuhla emakethe kunamathuba athile lapho okuncane kunakho konke kwendlu kungadlala nge-automata ehlukile engaba kuhlelwe ukwenza ukunyakaza okuchazwe ngaphambilini. Isibonelo kungaba ukuthola irobhothi, kusuka endaweni ephathekayo A egumbini, ukufinyelela iphuzu B elisungulwe yithi uqobo.
Ngokwami, kumele ngivume ukuthi lo mbono yiwo, ngaleso sikhathi, engakhetha ukuwuqala ukusebenza kule ndawo futhi, yize zisencane izingane zivame ukungabi nakuthula, singafinyelela ubenze babe nentshisekelo ngezinselelo esibabeka kuzo inqobo nje uma sibasiza ngaso sonke isikhathi.
Iminyaka ephakathi kweminyaka emi-7 nengu-9
Kulesi sigaba iqiniso ukuthi amancane asevele enawo amakhono athuthukiswe kakhuluNgemuva kwalokho, sebekhulile futhi namandla abo aphakeme kakhulu kunalokho esingakucabanga, ikakhulukazi uma sibasiza ukubaqeqesha.
Lokhu kuvula ngqo umnyango wokusetshenziswa kwezinhlelo nezinselelo ezisezingeni eliphakeme kakhulu kubo, ikakhulukazi futhi ngokusho kochwepheshe, kule minyaka, okufanele kuhloswe ngazo ukukhuthaza ukuhlakanipha okuningana njengezibalo, ezendawo noma ezolimi
Ukulandela izincomo zeleveli edlule, akukho okungcono kunokuya kunguqulo kaJr Scratch, ikakhulukazi uma uyiqonda kahle, inguqulo esezingeni eliphakeme kakhulu, ethathwa njengenye yezingxenyekazi eziyinhloko zokuhlela izinhlelo emhlabeni. Le nguqulo yenzelwe izingane ezingaphezu kweminyaka engu-8 anos Yize, njengoba kuvame ukwenzeka, konke kuzoncika enganeni uqobo nasentshisekelo angaba nayo.
Uma ujwayelene neScratch, lolu kuseluhlobo lolimi olusezingeni eliphezulu olufihlwe ngemuva kokusetshenziswa kwezicucu ezinemibala. Ngokwami, kubonakala ngathi yipulatifomu ethokozisayo engingaqala ngayo, ikakhulukazi uma sibheka ukuthi inakho njengamanje amaphrojekthi angaphezu kwezigidi eziyi-14 kumawebhusayithi awo lokho kungasebenza njengesiqondisi.
ITynker ulimi lokuhlela ukusetshenziswa kwalo kungaba ifana kakhulu neScratch ngoba kusekelwe ekubekweni kwamabhulokhi. Enye yezinzuzo eziphambili, ngaphezu kokulandela ifilosofi ye-freemium, ukuthi kungxenyekazi yayo esiyitholayo okokufundisa okuningi lokho okusisiza ukuthi siqale ngesoftware.
Njengokhetho lwangaphambilini, labo ababhekele I-Tynker incoma ukusetshenziswa kwayo ezinganeni ezindala kuneminyaka engu-8, iminyaka lapho bekholelwa ukuthi izingane zizokuzuza ngempela lokho okuhlinzekwa yipulatifomu, enamazinga amaningana nezinhloso ezahlukahlukene okufanele zihlangatshezwe.
Iminyaka ephakathi kweminyaka eyishumi kuya kwengu-10
Kuleli qophelo, iqiniso ukuthi izingane zethu azisekho futhi amandla azo akhule kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Kuleli qophelo, kufanele siyeke ukubakhuthaza ngokubatshela ukuthi benzeni ukuze bafinyelele kubo izinhloso zakho bese unquma ukuthi kufanele uzifeze kanjani.
Leli yiphuzu lapho mhlawumbe into enhle kakhulu ukuthi baqala ukuyeka ukusebenza ngamabhulokhi bese beqhubeka nokwenza amaphrojekthi abo ahlukene ngombhalo, noma kunjalo, ngakolunye uhlangothi, okwamanje asikwazi ukubakhombisa izinzuzo yezilimi ezahlukahlukene zokuhlela, ngalokho kuzoba nesikhathi.
Le software ekhethekile engiyitholile ingaphezu kokuthakazelisa, lokhu kungenxa yokuthi, yize ingasakhiwa ngamabhulokhi, iqiniso ukuthi kungaba yisinyathelo esiphakathi esiqondiswe ekusetshenzisweni kwezindawo zobuchwepheshe, ikakhulukazi ngenxa yesixhumi esibonakalayo .
KuCode Monkey kuzofanele sikwenze lawula izenzo ezenziwa yinkawu okumele iqoqe ubhanana ngezimo ezahlukahlukene. Ukuhambisa inkawu, njengoba uqinisekile ukucabanga, kufanele sibhale ikhodi sisebenzisa imiyalo elula kakhulu. Njengoba siya ezingeni elilandelayo, ubunzima buyanda.
Iminyaka ephakathi kweminyaka eyishumi kuya kwengu-13
Okwamanje ezimpilweni zezingane zethu sikule minyaka 'difícil'. Amathuba, ngokuya ngamakhono wokuhlelela omncane wethu, maningi ngoba kunezifundo ezisheshisiwe zokufunda amasu wokuhlela angathakazelisa yize kukhona nezinkundla ezithile eziphakamisa izindlela ezahlukahlukene.
I-AppInventor Akuyona into ngaphandle kohlelo ongadala kulo izinhlelo ze-Android ngokuhudula amabhulokhi ekhodi. Ngeminye imininingwane, akutshele ukuthi lokhu kube njalo ithuthukiswe yiGoogle uqobo futhi ukuziphendukela kwemvelo kwayo kuthwalwa yilutho ngaphansi MIT.
Into ethakazelisa kakhulu nge-AppInventor ukuthi yiyo ngokuphelele free futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa, ikakhulukazi uma sinaka ukuthi kunenqwaba yezifundo ezikwi-intanethi esingaqala ngazo ukuqala kwethu.
Yebo, ufunda kahle, kule minyaka yobudala kungaba ngaphezu kokuthakazelisa ukuqala ukusebenzisa Python, ikakhulukazi uma insizwa esendlini yethu ifuna ukuyeka ukusebenza ngamabhulokhi futhi ingene ezinhlelweni zobuchwepheshe ngenxa yokukhathazeka kwayo.
Njengoba wazi kahle, sisebenzisana nolimi lohlelo ngakho konke abakushoyo. Ngiyifakile ngoba miningi ochwepheshe abancoma ukusebenzisa iPython njengesingeniso kuhlelo lombhalo ngobulula bayo. Ngokulandelayo, ngokwenza ucwaningo oluncane, uzokwazi ukuthola okokufundisa okuningi ukuthola ukuthi ungaqala kanjani kusukela eminyakeni eyi-14 ubudala kanye neminye imithombo yolwazi efana nezincwadi zendabuko zempilo yonke.
Iminyaka engu-17 nangaphezulu
Kuleli qophelo, ngisho nakulokhu okwedlule, sesivele sikhuluma ngabantu abasha abakheke ngokuphelele kanye nanoma imuphi umuntu omdala ofuna ukungena kulo mhlaba.
Kule minyaka, kujwayelekile ukuthi abantu abasha baqale ukuhlela ikusasa labo. Njengoba kunengqondo ngamathuba amaningi, kusukela ekuqaleni ukusebenza ngezilimi zokuhlela umbhalo ukuqhubeka nokushisa izigaba kancane kancane kuze kufike eJava ephindaphindayo, i-Objective-C ... yezilimi ezigxile entweni noma, uma ufuna ukuya ngokuqhubekayo, ngena ezweni elinamandla futhi elihlukahlukene leC.
Kuleli zinga ngifuna ukuphakamisa iziphakamiso eziningana nakuba, mathupha ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi sokwenza izinto ezibucayi kakhulu njengamaphrojekthi akho lapho ungahlanganisa khona izinhlelo ne-elekthronikhi.
Amandla weqiniso we I-Arduino ilele kakhulu amathuba maqondana nokwenza ngokwezifiso, ukuguquguquka kwemisebenzi kanye nokusabalalisa amandla. Elinye iphuzu esivuna kakhulu ukuthi namuhla kunomphakathi omkhulu ngemuva kwephrojekthi lapho ungaphendukela khona ukuze ufunde ukusebenza kumaphrojekthi wangempela.
Uma ungumthandi womdlalo wevidiyo futhi ufuna ukuthuthukisa umsebenzi wakho wobuchwepheshe ngale ndlela, ungahle ube nentshisekelo yokuzama UStencyl, elinye lamapulatifomu okwakha amageyimu evidiyo athuthuke kakhulu okwamanje ukuthi mangaki amahhala (kunenguqulo ekhokhelwayo) leyo kuzokuvumela ukuthi wakhe imidlalo ethuthukile, eyenziwe ngezifiso enamandla amakhulu.
Ingxenye engemihle ukuthi ukuqala ukuyisebenzisa kufanele ulandele izifundo ezimbalwa ezikhona kuwebhusayithi yayo esemthethweni kusukela lapho kuyinkimbinkimbi impela, okungenani kuze kube, ngemuva kwesikhashana, siqala ukuba nokukhululeka endaweni yesikhulumi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » General » Yiluphi ulimi lokuhlela lokufundisa izingane zami
Ukuqala nge-Arduino: imaphi amabhodi namakhithi angaba mnandi kakhulu ukuqala